Akụkọ - Kedu nke bụ igwe polishing kwesiri gị
Nke na otu onye bụ nri polishing igwe gị?
N'oge a, e nwere ọtụtụ ụdị igwe na-egbu polishing n'ahịa, mana ha nwere ike kewaa ụzọ atọ, nke bụ polisher rotary, polisher dual-action, na polisher rotation da polisher.
Polisher rotary bụ igwe na - eme ka ọ rụọ ọrụ na - eji naanị ụdị mmegharị 1 iji mepụta nsonaazụ polishing. Ọ dị ezigbo mma na ịcha, na-arụ ọrụ ngwa ngwa, mana ọ na-achọkwa ahụmịhe na ihe ọmụma iji rụọ ọrụ nke ọma.
Polisher abụọ na-eme ihe na-eji okirikiri emegharị yana agagharị na-agagharị iji mepụta ọrụ abụọ nwere uche. Ngagharị a bara uru mgbe eji igwe eme ihe elu. A na-amata onye na-eme polis abụọ ahụ maka ịdị mfe ịrụ ọrụ, na-eme ka ọ dị mma maka ndị mbido.
Polisher a na-amanye ịgbanye bụ njikọta nke atụmatụ rotary na omume abụọ.
Ọ bụkwa polis na-eme ihe abụọ, na-agbagharị na orbits dị iche iche, ya mere na-ekesa karịa ọkụ n'ofe agba ahụ, na-eme ka ọ dị nchebe karịa polis rotary. Mana ọ gaghị akwụsị ịgbagharị n'agbanyeghị agbanyeghị mgbada ị na-eji ma e jiri ya tụnyere polis na-arụ ọrụ abụọ. N'ihe niile, ntụgharị a na-amanye ndị mmadụ na-enye ihe ka mma iji tụnyere DA, mana nkọwapụta akpaaka dị nchebe ka e jiri ya tụnyere rotary.
Họrọ onye na - eme ọsịsọ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na:
1.You ọhụrụ na igwe polishing;
2.You chọrọ ihe dị mfe iji;
3.You chọrọ iji ole na ole swirls na ọkụ ọkọ si gị paintwork;
Y na-elekọta ụgbọ ala gị ma ọ bụ ụgbọ ala ezinụlọ gị;
5.You na-achọ ihe nchekwa, mana ike polisher ụgbọ ala;
6.Ychọrọ iji ya mee ihe mgbe niile iji debe agba gị;
Ychọrọ ịmalite azụmaahịa ma ọ bụ oge zuru ezu ịkọwapụta ahịa;
8.You na-achọ a ngwá ọrụ iji hụ na a swirl-free imecha;
9.Boats/RV ma ọ bụ ndị nwe ụgbọelu na-achọ ụzọ ka mma, ngwa ngwa, na nchekwa maka ịchekwa ụgbọ mmiri / RVs / ụgbọ elu ha.
Họrọ Agbanwe Agbanye DA Polisher ma ọ bụrụ na:
1.You na-achọ ihe nchekwa, mana ike polisher;
2.You ọhụrụ na igwe polishing ma nwee ike ịmụta ngwa ngwa;
3.You ejirila polis na-eme ihe abụọ ma dị njikere maka nzọụkwụ ọzọ;
4.You chọrọ nsonaazụ ya site na rotary yana nchekwa niile nke DA!
Họrọ Rotary Polisher ma ọ bụrụ na:
1.You nwere nnukwu ihe osise dị iche iche ịchọrọ iwepụ;
2.You nwere oge iji jide aka na igwe ọrụ ya;
3.I nwere ahia ahia nke choro igbakwunye ihe di ike karie ike;
4.Y chọrọ ịbụ ọkachamara detailer;
5.You bu onye nwere obi uto nke kari otu ma obu karia nke ndi ozo nke oru ma ugbu a di njikere imeghari na polis.